Tag: fantsona | Martech Zone
Metadata.io: Ataovy mandeha ho azy ny Generation-nao fantsona ho an'ny ABM
Alarobia, Jona 3, 2020 Alarobia, Jona 3, 2020 Douglas Karr
Metadata dia sehatra fangatahana mizaka tena izay manatsara ny fandanianao doka ara-tsosialy sy nomerika hanampiana anao hamorona haingana ny fangatahana kalitao sy fantsom-pivoarana avy amin'ireo kaonty kendrenao. Ny sehatry ny fianaran'izy ireo AI sy ny milina dia mamakafaka ny angona CRM manan-tantara hahafantarana hoe iza no tokony hahita ny dokam-barotrao, avy eo ny motera fanandramana marobe dia manandrana fiovana an-jatony ary manatsara izay manome ny valiny tsara indrindra. Ny valiny dia fantsom-pahalalana tsara avy amin'ny kaonty kendrena
Alakamisy, Jolay 13, 2017 Alakamisy, Jolay 13, 2017 Douglas Karr
Ny mpanavao ny haitao haingam-pandeha B2B ConnectLeader dia nanambara ny fisian'ny fitaovana fampiroboroboana ny varotra TopRung sy ny fitaovana fitantanana fampisehoana. TopRung dia mampiasa ny herin'ny fifaninanana ekipa mba hampifanarahana, handraisana ary hanafainganana ireo hetsika fivarotana, ary koa handroahana ny fizotry ny fizotry ny varotra ary hamorona resadresaka ho an'ny fitarihana andiany maro izay lasa fotoana mety amin'ny fantsona. TopRung dia mampiasa ny herin'ny fifaninanana ekipa, ny fanatanjahantena ary ny fahafinaretana: Mampifanaraka, manangana ary manafaingana ny hetsika varotra Manaiky ny fizotry ny fizotry ny varotra Mamorona resadresaka ho an'ny fitarihana mitarika fitadiavana lasa fitarihana pipa. TopRung dia voatendry ho finalist tao